Liiska dadka ay Hillary Clinton u eersanayso guuldarradii doorashada - BBC News Somali
Buugga ay qortay Clinton oo ciwaankiisu yahay 'Maxaa Dhacay'
Ciwaanka quruxsan ee buugga cusub ee Hillary Clinton ee ah "Maxaa dhacay?" ayaa waxaa loo turjuman karaa siyaabo badan.
James Comey agaasimihii hore ee FBI
"Haddii aysan ahaan lahayn farogalintii FBI ee maalmihii ugu dambeeyay, waan ku guulaysan lahayn Aqalka Cad" ayay buugga ku tiri Hillary Clinton.
Vladamir Putin madaxweynaha Ruushka
"Waligay ma malaysan in uu ku dhiiran karo in uu weerar intaas la'eg kusoo qaado dimoqoraadiyadeena inaga oo indhaheena furanyihiin, kadibna ay u suurtoobayso in uusan wax ciqaab ah la kulmin" ayay buugga ku qortay Clinton oo ka hadlaysa farogalinta la sheegay in Ruushka ku sameeyay doorashadii Maraykanka.
Hay'adaha sirdoonka Maraykanka waxa ay hoosta ka xariiqeen in Ruushka uu farogaliyay doorashada, doonayayna in xisbiga Jamhuuriga uu ku guulaysto doorashada.
Barack Obama madaxweynihii hore ee Maraykanka
"Waxaan is weeydiiyaa ka waran haddii madaxweyne Obama uu dadka kala hadli lahaa taleefishinka 2016-kii, una sheegi lahaa halista ay wajahayso dimoqoraadiyadeena, malaha dad badan oo Maraykan ah ayaa ku baraarugi lahaa halista xiligaas jirtay" ayay buugga ku tiri Clinton oo farta ku fiiqday in Obama uu ka aamusay xogtii uu ka hayay farogalinta Ruushka.
Trump iyo Clinton oo ka qaybgalaya dood labadooda dhexmartay
"Kuwa badan oo ka mid ah saxaafadda falanqeysa arrimaha siyaasadda, hadda waa ay wajihi la'yihiin xaqiiqda ah in ay Trump ka caawiyeen in la doorto, iyaga oo siiyay fursad badan, waxa kale oo ay buunbuuniyeen arrintii emailadayda in ka badan saddex jeer intii ay hadal hayeen arrimaha muhiimka ah ee taabanaya nolosha dadka caadiga ah" ayaa lagu qoray buugga Clinton.
Clinton ayaa eedaysay Sanders iyo Obamad
"Weeraradiisa waxa ay ahaayeen kuwa yeeshay saamayn waarta, waxa ay adkaysay in aan mideyno xoogaga dimoqoraadiga, waxayna wadada u xaartay in Trump uu guulaysto" ayay buugga ku tiri Clinton oo ka hadlaysa Berni Sanders oo ahaa musharixii kula tartamay musharaxnimada xisbiga dimoqoraadiga dhexdiisa.
Jill Stein waxa ay ka mid ahayd musharixiinta madaxtinimada Maraykanka
"Waxaa jiray dad u codeeyay Jill Stein oo ku filan in ay natiijada dhanka kale u weeciyaan in ka badan codadkii uu heley Ralph Nader sanadkii 2000" ayay buugga ku sheegtay Clinton oo ka hadlaysay haweenaydii u tartantay doorashadii madaxtinimada Maraykanka iyada oo ah musharax madax banaan.
Hillary Clinton waxa ay ahayd qofka kaliya kaliya ee dumarka ah ee ebed xisbiyada waaweyn ee Maraykanka musharax u noqota
"Waa in la qiraa, waxa dhacay 2016-ka waxa ay ahaayeen wax muujinaya in sinji takoor (dumar nacayb) uu qayb weyn ka qaatay, waxaana xaalka uga sii daray in musharax dumarka lid ku ah uu ku guulaystay doorashada" ayay tiri Clinton oo farta ku fiiqaysa in dumarnimadeeda darteed ay qeyb ka tahay in ay ku guuldaraysato doorashada madaxtinimada Maraykanka.
"Wuxuu ku guulaystay in uu rajo abuuro, islamarkaasina taabto waxyaabihii caddaanka ay tabanayeen, gaar ahaan malaayiin caddaanka ah oo cabasho ka qabay sida ay wax u socdaan" ayay tiri Clinton.
"Waad eedeyn kartaa xogtii la xaday, fariimihii aan dirnay, wax kasta ayaad eedda dusha uga tuuri kartaa, laakiin ugu dambayn aniga ayaa ahaa musharaxa" ayay tiri Clinton oo nafteeda eedeysay.
Clinton: Madaxweynaha la doortay aan fursad siino
Clinton oo sheegtay inaysan qalad sameyn
Suudaan ma waxay dib uga guranaysaa heshiiskii caadiyaynta xiriirka Israa'iil?
Ajakis laftiisa muxuu geeridiisa ka yiri hadda ka hor? Kumuuse ahaa?
Nin ay Mareykanka aad u raadinayeen oo ay 'CIA damacday inay London ka qafaalato'
Soomaalida cuntadee ayay caalamka ugu faantaa marka ay Itoobiya ku faanto Canjeero?